Elungiselelweyo isilinda encinane isilinda ishawa yelanga
Ubunzima bomzimba: malunga. 6.0 Kg Ngeenyawo
I-KR-08 Ibhokisi ibhokisi 1040 7.5 6.5 1.00 114.50 34.00 16.50
Ingasetyenziselwa kwizitiya kunye neelwandle. Emva kokuqubha, abasebenzisi banokusebenzisa amanzi afudumeleyo kule ishawa ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo. Xa kuthelekiswa neshawa esetyenziswa kakhulu ngaphakathi, ishawa yelanga yangaphandle ibhetyebhetye ngakumbi, iyakulungeleka, kwaye ibhetyebhetye. Ezi mpawu zenza ukuba ishawa yelanga isetyenziswe ngakumbi nangakumbi.
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Kule minyaka, iikholamu zeshawari ezenziwe ngezi zinto zihlala zisetyenziselwa ixesha elide kwaye kunqabile ukusilela.
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Ayisebenzisi iingcingo kunye neebhetri. Ukusetyenziswa kwamandla elanga kuvumela abantu ukuba baphephe iingozi ezinokubakho zokhuseleko zombane xa bengaphandle, kwaye kuvumela nemiboniso enjengolwandle okanye igadi ukuba ihambelane ngakumbi neemveliso zethu.
Ubume besilinda buvumela iimveliso zethu ukuba zilingane kwiindawo ezininzi. Nokuba kungasiphi isiganeko esisetyenzisiweyo, ihlala ilungelelaniswa kwaye ingabonakali kwaye ibonisa ubuhle bokulungelelanisa. Ukudibanisa nobume besilinda ziintlobo ngeentlobo zoyilo zombala. Imibala eyahlukeneyo inokuhlangabezana nokukhetha kunye neemfuno zakho ezahlukeneyo, kwaye inokunika abantu umbono wokutsha.
Egqithileyo ishawa yetyalar kunye neshushu seqondo lobushushu
Okulandelayo: Iimodeli ezahlukeneyo ishawa yelanga emfutshane